I-Semalt ichaza ukuthi kungani kufanele ukwandise izithombe ku-SEO
Ukulungiswa kwezithombe yingxenye ebalulekile yendawo yonkeIsu, ngakho kufanele uthathe isithombe se-SEO ngokubaluleke kakhulu, ikakhulu uma okuqukethwe okubonakalayo kungumgogodla womkhankaso wakho wokumaketha.Yingakho abakhi bewebhusayithi njenge-WordPress banikeza ukufometha kwesithombe ngokuzenzekelayo njengengxenye ebalulekile ekusebenzeni kwabo kusayithi.
Ukuhlelwa kwesithombe kufanele kuhlanganise izithombe kuwebhusayithi yakhokufaka phakathi isihloko, izithombe eziveziwe nezithombe ezifakiwe - best computer trade program. Umphathi Wempumelelo Yekhasimende Semalt , u-Igor Gamanenko uchaza ukuthi kungani isithombeUkulungiswa kubalulekile ekusebenzeni kwakho.
Uma ukwandisa izithombe zakho ngokufometha okufanelenokuphinda, bazobonisa ukucinga kwesithombe okuhlobene ku-injini yokusesha. Uma izithombe zakho zihlelwe ohlwini lwezithombe ze-Googleusesho, uzothola ithrafikhi eyengeziwe futhi uthuthukise ukubonakala komkhiqizo wakho. Uma uthuthukisa zonke izithombe zakho futhi udale eliphezuluokuqukethwe, uzobona ukukhula okuphawulekayo kwethrafikhi.
Uma ulayisha izithombe ezisezingeni eliphezulu kwiwebhusayithi yakho,kuzothola kancane futhi abasebenzisi kuzodingeka balinde ukuze bathole okuqukethwe okuyinhloko kwesayithi lakho. Isivinini esincane se-site sisho isipiliyoni esibi somsebenzisi sakhoizivakashi ikakhulu uma isiphequluli somsebenzisi silanda amafayela wesithombe.
Isithombe sokulayisha izithombe sivame ngisho nalapho kunenkingaayihlangene neseva yakho. Esimweni esinjalo, isivakashi sesayithi sizofunda lesi sihloko, kodwa ngeke sibone noma yimaphi izithombe, ezinye ezingenaluthoizindawo lapho kufanele khona izithombe. Uma ukwandisa izithombe zakho ngokungeza umbhalo we-alt kubo, izivakashi zakho zendawo zingase zingaboniizithombe kodwa angafunda ukuthi isithombe siphila ngemuva kokuthi inkinga yokulayisha isithombe ivele.
Indlela Yokuthuthukisa Izithombe ZaseSayithi Yakho
Ukucindezelwa kwezithombe kuthuthukisa ijubane lokulayishawebhusayithi yakho. Ngokucabangela ukuthi iningi lezivakashi zakho lifinyelela kwisayithi lakho kumadivayisi eselula, akudingekile ukulayisha ukuxazulula okukhuluizithombe ezinesisindo sama-megabytes. Kufanele usike ubukhulu bezithombe zakho ngenkathi ugcina ikhwalithi ehloniphekile. Futhi, fometha izithombe zakhongewebhu ie i-PNG, i-GIF ne-JPG. Ungaphinda uqoqe imethadatha yezithombe zakho ukusika usayizi ngisho nangaphezulu.
Uma usebenzisa izithombe mahhala kusuka kuwebhu noma ezithombeni zezithombe,kufanele ushintshe izihloko zobuchwepheshe ezizihlanganiswe nabo njengezinombolo nezinhlamvu zocingo eside, enikeza izincazelo ezimfushane ezinembilengalokho abamelela khona. Ungaphinda ufake amanye amagama angukhiye ahlobene nebhizinisi lakho uma lihambisana nalokho okusesithombeni.
Hlanganisa njalo amathegi e-alt achaza ukuthi yiniesithombeni. Isibonelo, faka amagama afana nethi "owesifazane", "udle" uma kungumfanekiso wesifazane odla isithelo.
Eyaziwa nangokuthi incazelo ye-alt, isichazamazwi sinjaloyini ebonisa lapho isithombe singalayishi. Ibuye ichaze isithombe se-Google search index. Le ndlela ikuvumela ukuba uchazeisithombe ngomusho owodwa.
I-Strategical ihlanganisa izithombe zakho nazo zonkeokuqukethwe kungcono kunokuwabeka phakathi kwezindima.
Ukulungiswa kwesithombe kungase kungabi ngaphezu kwakhoOkubaluleke kakhulu kodwa kufanele ukwenze ngenxa yezinzuzo ezishiwo futhi kuthatha imizuzu embalwa ukufeza.